Chii chakakanganisika mumunda weEdeni? Chikamu 2 Genesisi Chitsauko 2
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Chii chakakanganisika mumunda weEdeni? Chikamu 2 Genesisi Chitsauko 2
Chii chakakanganisika mumunda weEdeni? Chikamu 2 Genesisi Chitsauko 2
GENESISI 2:1 Denga nenyika zvikapera saizvozvo novuzhinji hwazvo.
GENESISI 1:1 Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika.
Mwari akasika denga (nzvimbo) nenyika kubva pasina, nekuti pakutanga kwaive kusina chiro.
Hatizivi kuti kusika uku kwakatora nguva yakareba sei nekuti Mwari haana kubvira apa gwara rekuti tironde kuti akatora nguva yakareba sei kusika zuva, mwedzi nenyeredzi, nenyika. Asi akabva aisa mvura panyika asati aisa hupenyu pairi. Mvura iyi yaizooma kuita chando mukutonhora kwenzvimbo. Nyika yakaoma nechando iyi yairatidzika sebhora rechando.
Pakutanga nyika yaive yakafukidzwa nechando chakaoma kusvikira mwari vaiswededza pedyo nezuva. Chando chakaoma chakatanga kunyunguduka zvidimbu zvihombe zvechando chakaoma zvikaparadzana. Iyi ndiyo yaive nguva yechando yekutanga (Ice Age) yakakwenenzvera chiso chenyika apo Mwari aifambisa zvidimbu zvechando zvakaoma izvi zvichitenderera. Pakanyunguduka zvidimbu zvese zvechando chakaoma, nyika yaive yafukidzwa nemvura, imwe yakapwa ikaita makore akasviba akabva avhariridza chiedza chezuva.
Mosesi aiona zvese izvi muchiratidzo. Chaaiona chete yaive mvura yakapararira kusvika kumagumo enyika nemativi ose. Chiso chenyika chaive chakati sandarara chisina chimiro. Chiso chenyika chaive chisina chiro (chakashama) pasina chimiro sezvo mvura isina zvuru nemakomo. Gore rakakora remvura yaive yapwa raive rakavhara zuva.
GENESISI 1:2 Nyika yakanga isina kugadzirwa, isina chiro; (yaive yakafukidzwa nemvura pamusoro pemvura paionekwa paive pakangoti sandarara pasina chiro kana chimiro) rima rakanga riripo pamusoro pemvura. (makore akasviba aitadzisa chiedza chezuva kusvika panyika kana pamvura yakadzika.)
Mwari akabva asarudza kupindira nekugadzira nyika ino kuti ikwanise kuraramika.
Kuita izvi Mwari akaita “mazuva” matanhatu aakaisa hupenyu panyika.
Kwaive kusina vanhu pakutanga saka Mwari aisazoshandisa mazuva evanhu emaawa 24.
II PETRO 3:8 Asi vadikanwa musakanganwe chinhu chimwe ichi, kuti kunaShe zuva rimwe rakaita samakore ane churu,
Nekuti kwaive kusina vanhu, Mwari aitara nguva mumazuva ake iye. Zuva rimwe raMwari makore 1 000 emakore edu isu vanhu.
Chiso chenyika chaive chakafukidzwa nerima zvekuti waisakwanisa kuona kana zuva. Kwaive kusina chinhu chakaita semasikati nehusiku panguva iyi, saka mazuva edu isu vanhu aisashanda.
Pazuva rechina Mwari haana kusika chero chinhu.
Zuva nemwedzi zvaive zvatovepo. Mwari akazviita kuti zviite mabasa azvo makuru aive kutonga masikati nehusiku.
Akaita kuti zuva ribate ushe masikati mwedzi ubate ushe husiku kupfurikidza kuisa nyika pachinhambwe chakafanira kubva kuzuva nemwedzi. Nyikawo yaifanira kutenderera nechinhambwe chakafanira kuti pave nezuva. Kana nyika ikatenderera ichinonoka zvakanyanya, masikati anopisa zvakanyanya. Mwari akabva apa nyika mafambiro akafanira ichitenderera zuva kuti tive negore.
GENESISI 1:16 Mwari akaita zviyedza zvikuru zviviri; chiedza chikuru kuti chibate vushe masikati, nechiedza chiduku, kuti chibate vushe vusiku, nenyeredzi vo.
Mwari aifanira kuisa kana kuronga zvinhu zvose panzvimbo dzakafanira nekugadzikika kukuru. Nyeredzi dzakaita zvikwata nekuiswa panzvimbo dzakasarudzika kana dzichionekwa kubva panyika. Zvikwata zvakasiyana zvenyeredzi zvinoonekwa mukati memwaka yegore yakasiyana. Saka denga ndiro raive karenda rekutanga.
GENESISI 1:17 Mwari akazviisa (nyeredzi) pasi penzvimbo yedenga, kuti zvivhenekere panyika.
Chikwata chenyeredzi dzekuchambe dzakaita muchinjiko dzinobatsira vanhu kuti vawane nzira dzekwavanoenda. Dzinobatsira zvikuru pakufamba. Izvi zvinoratidzira chinhu chekuti tinowana nzira yekuenda kudenga chete kana tikauya nepamuchinjiko wepaCalvari.
GENESISI 2:2 Mwari akapedza basa rake raakaita nomusi wechinomwe: akazorora nomusi wechinomwe pabasa rake rose raakaita.
Mwari akatanga kusika nyika mukati menguva yaasina kubvira azivisa kwatiri. Akaita mazuva ake iye matanhatu, 6000 emakore edu isu vanhu, mukati mawo akaita kuti nyika ive nzvimbo inoraramika nezvinorarama. Adamu, mwanakomana waMwari, nemukadzi wake Eva vakabva vasiiwa kuti vatonge nyika muzuva rechinomwe mumazuva edu isu vanhu raizotora makore 1 000. Mwari akazorora nekuti mabasa ake ose aive apedziswa uye kwaive kusina chaive chasara chaida kuitwa.
Asi uku kwaive kuedzwa kukuru kwerudzi rwevanhu.
Vaizorarama neshoko raMwari here kana kuti vaizoitawo sarudzo yavo yekumwe kutenda. Mwari akavaudza kuti vawande nekuberekana saka kwaive kuita mwana (chibereko chedumbu) aive nekuzara kweShoko raMwari (mbeu yehupenyu husingaperi) maAri. Adamu aifanira kungomirira kusvikira Mwari azadzisa hurongwa hwake.
Miti yemichero inobereka michero ine mbeu dzayo mukati mayo.
GENESISI 1:11 …nemiti inobereka michero inamarudzi ayo, mbeu dzayo dziri mukati mayo,
GENESISI 1:27 Mwari akasika munhu nemufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMwari; akavasika murume nomukadzi.
Mwari ndiMweya saka akasika Adamu ari munhu wemweya kuti ave ari mufananidzo waMwari. Saka mweya wemunhu wega ndiwo mufananidzo waMwari, kwete muviri wemunhu. Adamu aivewo nehunhu hwechikadzi mumweya wake.
GENESISI 5:2 Wakavasika murume nomukadzi; akavaropafadza, akavatumidza zita rinonzi munhu, musi waakavasika.
Mwari akasika munhu wemweya akaisa hunhu hwechikadzi hwemukadzi wake aaizova naye maari. Mukadzi aive asingazivi chinhu panguva iyi. Munguva yaizotevera Mwari aizoisa hunhu hwechidzimai mune umwe muviri iye aizova munhu akasiyana naAdamu.
GENESISI 1:28 Mwari akavaropafadza, Mwari akati kwavari, berekai, muwande, muzadze nyika, mubate vushe pairi, muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika.
Ari munhu wemweya Adamu akaudzwa kuti awande. Izvi zvaive zvisina chekuita nekusangana pabonde. Mhuka dzinorarama nehunhu hwekuberekwa nahwo mhuka yechikadzi kuda kwayo bonde kunobatidzwa apo inenge iine “nhomba” kuti dziberekane dziwande. Kuda bonde uku kunobva kwadzimwa. Saka pakwaizova nemhuka dzakakwana kuti dzizadze nyika, Mwari aizodzima zvachose chido chekusangana pabonde kumhuka kuitira kuti pasazova nemhuka dzakawandisa panyika.
Asi Mwari akaita zvakasiyana kuvanhu. Akavapa simba rekuzvisarudzira. Saka dai Mwari akavatendera kusangana pabonde aisazogona kuvadzivisa (sezvo kwaisazova kuda kwavo) vanhu vaibva varamba vachiwandisa panyika. Huwandu hwevanhu panyika hwakawedzera zvakapetwa kaviri pamakore 40 adarika. Zvinhu zvichashata kana zvikaramba zvakadaro munguva inouya. Tichiri nerufu nehondo nezvirwere kuitira kukamura huwandu hwevanhu, asi zvisinei neizvi huwandu hwedu huri kuramba huchingokura. Chimbofungai kuti nyika yakanakisa inenge yakaita sei kana pasina vanofa vanhu vese vachiramba vari vadiki uye nekuda kwekuzvisarudzira voita vana vakawanda zvavanoda. Chingotarisai nyakanyaka yekuwandisa kwevanhu kunenge kuripo.
Kuwanda nekusangana pabonde, kukabatanidzwa nekuzvisarudzira, yaive isiri nzira yakanaka pakurarama kwemunda weEdeni kwenguva refu.
Mhuka hadzitadzi nekuti hadzizivi musiyano wechakanaka nechakaipa. Saka mhuka dzaisafanira kufa kubva pekutanga. Dzaitokwanisa kurarama nekusingaperi.
Asi ndicho chinobva chava chikamu chakaoma.
Mwari aida kuti munhu akwanise kuzvisarudzira kuitira kuti ave ari mufananidzo waMwari.
Asi kuzvisarudzira kunosanganisira kusarudza kubva pazvinhu zvakasiyana. Saka sarudzo dzakanaka nedzakaipa dzaifanira kuvapo.
Saka kana munhu akasarudza sarudzo yakaipa, ichocho chinenge chiri chivi, chinokonzeresa rufu kuti rupindire.
Saka Mwari aifanira kutsanangura kuna Adamu musiyano wechinhu chakanaka nechakaipa. Mwari aizosiya Adamu achitonga kuitira kuti Adamu akwanise kushandisa simba rekuzvisarudzira achitonga muEdeni.
Asi vanhu vanotambudzwa nezvinhu zviviri: kusagona kumirira nguva yaMwari uye kuda kubatira Mwari nenzira dzavo, pachinzvimbo chenzira dzaMwari.
Isu vanhu tinofadzwa nezvinhu zvinotiitira, topedza nguva yedu tichiedza kuitira Mwari asi kusiri kuda kwaMwari. Idzi ndidzo nheyo dzechitendero. Asi muchitendero hamuna kupona.
Nekuti chokwadi chakawandisa, isu tese tine zvatinosarudza, tinoona zvatinoda kuona tosarudza zvinotiitira, nekuzvinatsa tinopedzisira takumanikidzira zvinhu zvese kuti zvienderane netarisiro dzedu.
Adamu nemukadzi wake vachashingirira here kurarama kwemakore 1 000 ezuva rechinomwe vomirira kuti mukadzi azadzwe neMweya Mutsvene obereka Mwanakomana waMwari – Jesu Kristu achiri mhandara. Jesu aizokura asina zvivi zvekufira. Ipapo aizodaidza vatsvene vake vosimuka kubva muguruva renyika, zvaachaita chaizvo pazuva rerumuko. Zvino panozova nehuwandu hwevanhu hwakafanira kuzadza nyika. Zvakare, hakwaizova nevanhu vakaipa vachazotsva kugehena.
Mwari haana kubvira audza Adamu kuti hurongwa hwake hwaive hwei, Adamu haaizogona kufunga kusvika pekuti izvozvo zvaigoneka. Ruzivo rwaAdamu rwaive nemuganhu pakuziva kuti chii chaizoitika.
Adamu haaigona kuzadzisa zvaidiwa naMwari, saka Adamu nemukadzi wake chavaigona kuita chete kumirira. Mwari ndiye aizozadzisa Shoko rake.
Asi vanhu vanokwanisa kutsungirira here kumirira kuti Mwari abate sekuda kwake?
GENESISI 2:3 Mwari akaropafadza musi wechinomwe, akauita mutsvene, nokuti wakazorora nawo pabasa rake rose, raakanga asika nokuita iye Mwari.
Vhesi iri rinopa musiyano pakati pekusika nekuita (kugadzira). Kusika zvinoreva kuita denga nenyika kubva pasina. Mwari akaita mweya wehupenyu kubva pasina akabva auisa mumbeu memirivo nemhuka. Akabva atora guruva raaive asika akaitira mhuka dzese nezvinomera miviri. Hapana chakasara chisina kuitwa. Zvese zvakapedziswa. Saka Mwari akabva azorora.
Zano rake raive rekuti Mwanakomana waMwari, Adamu, aizotonga panyika nemukadzi wake (aive asati ava nezita panguva iyi) kwemakore 1 000. Mukadzi zvinoreva kuti akatorwa kubva pamurume.
Satani akabva akanganisa hurongwa uhwu. Saka Mwari aizoona kuti zvazadziswa munguva yaizouya. Ndicho chikonzero nei Jesu Kristu, Mwanakomana waMwari, nemwenga wake kereke yemaKristu vachazotonga panyika kwemakore 1 000 muMereniyamu nguva inotevera hondo yepaAmagedhoni. Mwenga anenge asina zita rake raakazvipa (Catholic, Anglican, Methodist nemamwe akadaro). MuKristu zvinoreva kuti ane hunhu hwaKristu.
GENESISI 2:4 Ndiko kuvamba kwedenga nenyika musi wazvakasikwa, nezuva irero Jehova Mwari raakasika naro nyika nedenga.
Mwari akasika denga (nzvimbo) nenyika kubva pasina akazviita kuti zvibate mabasa azvo. Mwari anoregerera vatadzi osika mweya mutsva mukati mavo. MaKristu aponeswa aya anobva aitwa kuti abatire Mwari kuti hurongwa hwake hwakarurama huzadziswe.
“Nezuva irero Mwari raakaita naro nyika nedenga”. Nderipi zuva rimwechete iri?
Apa ndipo Mwari, pakutanga, paakaronga mudzi werudzi rwevanhu. Mupfungwa dzake aitarisa Mufananidzo Mukuru wehurongwa hwake zvese nekadikidiki kekupedzisira pakuita izvi. Aizoita dzokororo yekutarisa zvinhu izvi mupfungwa dzake achiona kana zvese zvafamba nenzira yaanga achida. Mwari haana paakasiya mukana wekukanganisa. Achironga zvakanakisa uye kunzvera zvakadzama chokwadi ndiko kuita kwake kukuru. Zvinhu hazvisi kungofamba zvichienda kusingazivikanwe. Mwari akazvironga zvese, kubva pakutanga.
GENESISI 2:5 Makwenzi esango akanga achigere kuvapo panyika, nemirivo yesango yakanga ichigere kumera; nokuti JEHOVA Mwari wakanga asati anisa mvura panyika, vuye kwakanga kusinomunhu kuzorima pasi.
Makwenzi ese nemirivo zvakatanga kunyorwa mupfungwa dzaMwari sendangariro. Zvino ndangariro dzake zvakazobuditswa seShoko rakataurwa. Zvino, ndiro simba raMwari, mashoko akataurwa aya akabva aratidzwa ari makwenzi nemirivo yechokwadi. Asi zvisati zvavapo, zvaive zvatove nenzvimbo mupfungwa dzaMwari mazvaingove ndangariro.
Uku ndiko kururama kwakaita Mwari pamabatiro aanoita zvinhu, kuti aiziva kuti rimwe nerimwe remabhiriyoni emakwenzi iwayo richamera papi.
Saka hatifaniri kubvira tataura kuti Mwari vatikanganwa.
Kunzvera kwaanoita zvinhu zvakanakisa kwakarongeka zvekuti hakuna angapfuura nepaari akasaonekwa.
Kusina kunaya. Kunaya kunokonzereswa nekusangana kwemhepo yakatonhora neyakapisa. Munguva yechando, mvura iri mumweya wakapisa wamunofema unoenda pafafitera rakavharwa remotokari inogadzana yoita madonhwe emvura. Saka pakutanga nyika yaive isina nzvimbo dzinopisa kana dzinotonhora.
Nyika yaive yakarurama yakamira zvakanaka panzvimbo payo saka Mwari aisimudza mvura kubva pasi ichienda mudenga (nzvimbo).
GENESISI 1:7 Mwari akaita nzvimbo; akaparadzanisa mvura yakanga iri pasi penzvimbo; nemvura yakanga iri pamusoro penzvimbo; zvikaita saizvozvo.
Mwari akaparadzanisa mvura yakanga iri pamusoro akaiita mweya wehaidhirojeni neokisijeni zvikabva zvaita ruchengetedzo rwakakora rusingaoneki rwakapoteredza nyika. Kupisa kwezuva kwaitorwa neruchengetedzo rwemweya iyi kwobva kwaparadzirwa zvakafanana zvakanakisa. Zvino kudziya kwakafanana uku kwaizodzikiswa panyika yaizova nemudziya wakanaka uye wakafanana pamusoro payo yese. Pasina nzvimbo dzaipisa kana kutonhora, kwaive kusina mhepo inotonhora yaizosangana neinopisa kuti pave nekunaya kwemvura.
GENESISI 2:6 Asi mhute yaisikwira ichibva panyika ichinyorovesa nyika yose.
Mhute yakadzikama yaidiridzira zvinomera zvese. Hapana gukuravhu raiitika. Nyika yose yaive yakaita seimba yeruvara rweshizha. Zvinomera zvinoyevedza zvaive zviri nzvimbo dzese.
GENESISI 2:7 Jehova Mwari akavumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya wevupenyu mumhuno dzake, munhu akava mweya mupenyu.
Kusvikira apa Adamu aive achiri mweya usingavonekwe. Zvino Mwari akasarudza kumuisa mumuviri wenyama. Mweya waAdamu waive wasikwa kubva pasina muChitsauko 1. Asi zvino Mwari haasi kusika kubva pasina nekuti muviri waAdamu wakaumbwa kana kuitwa kubva kuguruva raive riripo kare. Kekutanga Adamu akatanga kuonekwa ari mumuviri wemunhu wenyama.
GENESISI 2:8 Jehova Mwari akasima munda muEdeni, kumabvazuva, akaisa po munhu waakanga avumba.
Mwari akasima munda wakanakisa kuitira mwanakomana wake. Raive paradhiso repanyika. Mwari aipa Mwanakomana wake zvakanakisa zvega.
GENESISI 2:9 JEHOVA Mwari akameresa pasi miti yose inofadza meso, neyakanaka kudya, vuye muti wovupenyu pakati pemunda, nemuti wekuziva zvakanaka nezvakaipa.
Marudzi ose emiti yemichero aivepo. Adamu aizodya michero kuti ape muviri wake kudya kunouvaka muviri kwese kwawaida.
Asi apa Adamu aive ava mumuviri wenyama nekudaro aive asisiri munhu wemweya. Zvino aive apiwa sarudzo dzekusarudza kubva padziri. Kuti ave nesimba rekuzvisarudzira aifanira kugona kuita sarudzo dzake dzaanoda.
MATEO 26:41 Rindai, munyengetere, kuti murega kupinda mukuidzwa: mweya unoda hawo asi nyama haine simba.
Nyama ndiyo inotikurira nekutikundisa nemiyedzo.
Ari munhu wemweya Adamu aive akachengetedzeka nekuti aikwanisa kuona imwe mweya. Zvino mweya wake waive wafuka nyama saka maziso ake enyama aive asisagone kuona mweya. Saka aive ave kukwanisa kunyengerwa nemweya yakaipa nekuti aive asisakwanise kuiona.
Mimwe yemiti yeBristiecone yemipaini kuAmerica yakararama kwemakore anosvika zvuru zvina nehafu. Saka muti ndicho chinhu chinorarama kwenguva yakarebesa panyika. Saka muti unorarama kwenguva refu ndiwo muenzaniso wakanaka wehupenyu husingaperi. Muti wehupenyu ndicho chiratidzo cheMweya waKristu. Mweya waKristu ndiwo waive chinhu chinoyevedza muEdeni kuna Adamu. Mweya waKristu waizomudzidzisa nekumutungamirira kuti agare ari kunze kwekubata kwezvivi.
Kwaingove nenzvimbo imwe yaive pakati pemunda weEdeni. “muti wehupenyu uripowo pakati pemunda weEdeni” zvinoreva kuti muti wehupenyu waive usiri wega pakati pemunda. Muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa waivepowo pakati pemunda weEdeni. Miti iyi yaizova sei yese pakati pemunda? Yaive yakarukana kana kumonana pamwechete. Miti miviri iyi iri pamwechete yaiita kunge muti umwechete. Mwari aizopa Adamu ruzivo kuti azive kuti muti upi waive upi. Mweya upi unopa hupenyu uye kuti mweya upi unopa rufu. Shoko raMwari rinofanirwa kuteverwa nemazvo kuitira kuti Adamu asanyengerwa nemuti wekuziva waimiririra ruzivo rwaSatani.
Chinhu chakaoma ndechekuti muti (mweya) wekuziva waive nezvese zvakanaka nezvakaipa. Waikwanisa kuona rutivi rwakanaka ukanyengereka kana ukasatora rutivi rwezvakashata zvawo. Kubva kuruzivo rwevanhu kwakauya motokari dzinotifambisa nzendo dzedu asi motokari dzimwechete idzodzo dzinourayawo vanhu vakawandisa munjodzi. Fetireza inobatsira kuti zvirimwa zvikure asiwo inoyeredzwa ichipinda muhova nemunzizi ichidzisvibisa. Masiteshi emasimba anotipa simba remagetsi asi achisvibisa denga okonzeresa shanduko pamamiriro ekunze. “Piritsi” rinoderedza kuwandisa kwevanhu nekumisa kuzvara asi rokudza kusazvibata pakusangana pabonde. Intaneti inotipa ruzivo rwunobatsira nezvevanhu vakashama. Saka ruzivo chikomborero chakasangana sezvo ruchiuya nezvakanaka nezvakaipa. Munezvezvitendero kereke yeRoman Catholic yaive naAmai Teresa vakaita muenzaniso wakanakisa nekubatsira vasina muCalcutta. Kereke imwechete iyi ine mapristi anoshungurudza vana.
Rudzi rwevanhu rwungaziva sei musiyano uri pakati pemiti miviri inomiririra Mweya waKristu usingaonekwe nemweya waSatani? Mweya miviri iyi yaikwikwidzana kuti itore njere dzemunhu.
Njere dzemunhu ndiyo yega nzvimbo yehondo iyo Satani anofungidzira kuti angakunde Mwari ari. Mwari anoda kuti munhu atende muShoko rake (kunova kutenda) uye Satani anoda kuti vanhu vatende zvimwe zvinhu zvisiri muMagwaro zvakaitwa neruzivo rwevanhu.
Saka mupfungwa dzemunhu mune hondo pakati peruzivo nekutenda. Uku ndiko kurwa kukuru pahondo dzose dzakarwiwa.
Munzira dzepfungwa dzakarukana nekuoma kunzwisisa, kurudziro inoiswa mundangariro dzedu nemweya miviri inopikisana iyi yakarukaniswa zvakanyanya. Tinoramba tichingoita ndangariro dzakanaka nedzakaipa uye tinoramba tichingofanira kusarudza kuti totenda mune zvipi uye tozviwisira kune mweya upi.
Munhu aifanirwa kutevera zvakataurwa naMwari muShoko rake nemazvo sezvo chiri ndicho chega chinhu chinotichengetedza kubva kuna Satani. Kana Satani akagona kubvisa vanhu kubva pakurarama neShoko zvariri, ipapo Satani anokwanisa zvakare kunyengera vanhu nezvimwe zvinhu zvisiri Chokwadi. Zvinhu zvisiri chokwadi izvi zvinozova chitendero, chinova nzira dzevanhu dzekubatira nadzo Mwari asi dzinotungamirira kurufu.
GENESISI 2:10 MuEdeni mukabuda rwizi kuzodiridza munda uyo; rukaparadzana ipapo, dzikaita hova ina.
Mvura mucherechedzo weMweya Mutsvene.
JOHANE 7:38 Unotenda kwandiri sezvazvarebwa norugwaro; nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukati make.
39 (Asi izvi wakareva zvoMweya waizopiwa avo vaitenda kwaari:)
Rwizi rwuchipatsanurwa kuva nzizi ina zvinomiririra zvipenyu zvina kana masimba mana anoita varindi vakapoteredza chigaro chaMwari chovushe. Mwari anopatsanura Mweya wake mutsvene muzvikamu zvina zvakasiyana uye zvakasununguka kuitira kuti urwise nzira dzakasiyana dzinounzwa nadzo nekuipa panyika naSatani.
ZVAKAZARURWA 4:6 Napakati pechigaro chovushe, napamativi ose echigaro chovushe, pakanga pane zvisikwa zvina zvipenyu, zvizere nameso mberi neshure.
Maziso mucherechedzo wehungwaru hunokwanisa kuona zviri kuitika. Varindi vemweya vazere nemaziso (vazere nehungwaru) zvese “mberi neshure” vanoziva zvichauya nezvakadarika. Havanganyengerwe. Dambudziko redu nderekuvateerera nekunzwa yambiro yavo nehutungamiriri hwemweya kubva kwavari.
GENESISI 2:11 Zita rowokutanga ndiPishoni: ndirwo runopoteredza nyika yose yeHavira, pane ndarama ipapo;
GENESISI 2:12 Ndarama yenyika iyeyo yakanaka; vuye vo panederiumu nebwe reoniksi.
Rwizi rwokutanga runoerera munyika yakanaka. Manna inobva kudenga ine ruvara rwebedaro. Mabwe maviri eoniksi aipfekwa nemupurista mukuru wemaJuda.
NUMERI 11:7 Mana yakanga yakafanana nembeu dzekorianderi, yakanga yakaita sebedaro.
EKSODO 28:9 Utorewo mabwe maviri eoniksi ugonyora pamusoro pawo mazita avana vaIsraeri.
Dzimwe nzizi nhatu dzinopinda nemunyika dzakazogarwa navavengi vavaIsraeri. Izvi zvinomiririra vanhu vanotanga zvakanaka naMwari vowira mukutadza voguma vava kupikisa Mwari.
GENESISI 2:13 Zita rerwizi rwechipiri ndiGihoni; ndirwo runopoteredza nyika yose yekushi.
II MAKORONIKE 14:9 Zvino Zera muEtiopia wakauya kuzorwa navo (Israeri neJudea) nehondo yavanhu vane zvuru zvezvuru,
GENESISI 2:14 Zita rorwizi rwechitatu ndiHidekeri; ndirwo rwunoyerera kumabvazuva kweAsiria, rwizi rwechina ndiYufratesi.
Asiria yakatapa nekuita nhapwa hushe hwekumusoro hweIsraeri. Rwizi rweEuphrates rwaierera ruchidarika nemuBabironi yakatapa hushe hwekunyazi kweJudea.
Mvura yerwizi rumwechete yaierera ichipinda munyika yakanaka dzimwe nzizi nhatu dzaiyerera dzichipinda munyika dzakazoita dzevavengi. Izvi mucherechedzo wekuti maJuda aizonamata Mwari mumwechete vekuBabironi vachinamata tiriniti. Tiriniti yaizopararira kunzvimbo dzakaita seIndia neEgipita yova chinamato chechipegani.
GENESISI 2:15 JEHOVA Mwari akatora munhu, akamuisa mumunda weEdeni, kuti aurime nokuuchengeta.
Chidzidzo chikuru: Mwari akaisa munhu muEdeni. Adamu aive akazvipira uye achidakuva ari pasi pehurongwa hwaMwari. Mwari vakamuudza kuti basa rake raive riri rekutarisira munda weEdeni nekuuchengeta uri zvawaive wasikwa naMwari uri.
GENESISI 2:16 JEHOVA Mwari akaraira munhu achiti: Ungadya hako miti yose yomunda:
Mwari aive ataura kuti miti yose yemichero yaive yakanaka pazuva rokutanga. Michero chaiyo yaive isina dambudziko rayaizokonzeresa. Kusvika nhasi michero ichiri kusarudzwa kuva chikamu chekudya kunovaka miviri.
Yambiro yakapiwa Adamu yaipikisa kudya muti wekuziva. Uyu waive usiri muti watinoona, sezvo miti yese yaive yakanaka. Ichi chaive chimwe chinhu icho Adamu aifanira kudzivirira. Mwari akadzidzisa Adamu pamusoro pemuti uyu wekuziva kuitira kuti Adamu agoziva kutadza kwawo kuitira kuti asanyengerwa. Hunhu hwemukadzi hwaive huchiri mukati memunhu rume saka nekudaro aive asina chaaiziva pane zvaiitika.
Hurongwa hwaMwari hwaive hwekupa Adamu mukadzi ndiye aizobereka Mwanakomana Jesu ari mhandara. Jesu aizokura odaidza vatsvene vake vasimudzwe kubva kuguruva renyika.
Zano raSatani raive rekunyengera Adamu nemukadzi wake aizouya kuti vaunze mwana kupfurikidza kusangana pabonde. Hachisi chivi kuti murume asangane pabonde nemukadzi wake, saka zvaizova zvakaipa papi? Yaive nhaurirano yakanaka. Dambudziko raive rekuti mwana aizova asina hupenyu husingagumi maari saka aizofa neimwe nguva.
Mwari aive atotanga kuisa muganhu pakuwanda kupfurikidza bonde. Raizova zuva rimwe. Zuva rimwe raMwari makore edu isu 1 000. hakuna akazvarwa kupfurikidza kusangana pabonde angararama makore 1 000. Munhu akararamisa kwazvo aive Metusera akararama kwemakore 969.
GENESISI 5:27 Mazuva ose aMetusera akanga ari makore anamazana mapfumbamwe namakumi matanhatu namapfumbamwe, akafa.
Ruzivo runokwanisa kurevawo kuita zvepabonde, sezvo kusangana pabonde kunodaidzwa pamurawo kuti “kuziva murume”.
GENESISI 4:1 Zvino Adamu wakaziva mukadzi wake Eva; iye ndokutora mimba akapona Kaini, akati: Ndawana munhu ndichibatsirwa naJEHOVA.
Adamu “akaziva” mukadzi wake zvinoreva kuti “vakasangana pabonde” naye. Aive adya zvemuti wekuziva zvakanaka nezvakaipa. Vanhu vakazvarwa nekusangana pabonde vanokwanisa kuva vanhu vakanaka kana vakaipa. Dambudziko riri pakuwanda kupfurikidza bonde nderekuti vanhu vose vakaipa, vakaita saHitler, vachatsva mugehena.
Munhu wekutanga kuberekwa nekusangana pabonde aive Kaini akanyepa kuna Mwari pamusoro pemunun’una wake Aberi mumashure mekuuraya Aberi. Saka munhu akatanga kuzvarwa nebonde aive munhu ainyepa uye mhondi.
Asi iyi ndiyo nzira inoshandiswa neBhaibheri kutsanangura Diaborosi.
JOHANE 8:44 Imi muri vababa venyu Diaborosi, munoda kuita kuda kwakaipa kwababa venyu. Iye akanga ari muvurayi kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, kana achireva nhema, unoreva zvake,nokuti ndiye wenhema, vuye baba vadzo.
Saka zvinoita sekuti Kaini aive mwanakomana waDiaborosi, pachinzvimbo chekuva mwanakomana waAdamu.
Saka kuberekwa nekusangana pabonde kwakabva pamatangiro akaipa.
Zvinodakadza, zvisinei nekuti Kaini aive dangwe Mwadhi yaMakoronike haina kubvira yataura nezvake. Izvi zvinoshamisa sezvo dangwe riine chinzvimbo chikuru uye richigamuchira chikamu chakapetwa kaviri chenhaka.
Bhaibheri rinotaura nezvaKaini semwana akaberekwa newakaipa.
I JOHANE 3:12 Tisingaiti saKaini, wakanga ari wowakaipa, akavuraya munun’una wake.
MATEO 13:19 Kana munhu akanzwa Shoko rovushe asingarinzwisisi, wakaipa unosvika, ndokubvisa chakakushwa mumoyo make, ndiye wakakushwa panzira.
Wakaipa rinomiririra Diaborosi anoita kuti vanhu vasiye kutenda.
Izvi hazviiti sekuti ndiAdamu, sezvo Adamu achidaidzwa kuti mwanakomana waMwari.
RUKA 3:38 Mwanakomana waEnosi mwanakomana waSeti, mwanakomana waAdamu mwanakomana waMwari.
GENESISI 2:18 JEHOVA Mwari akati zve: Hazvina kunaka kuti Munhu agare ari oga, ndichamuitira mubatsiri wakamukwanira.
Zvino nhandare yaive yorongedzwa kuti mutambo utange mumunda weEdeni. Adamu paaive ari munhu wemweya aikwanisa kuona imwe mweya, saka aikwanisa kuziva Diaborosi zviri nyore saka aisanyengerwa naye. Zvaive zvakanakawo kuti ave nehunhu hwechidzimai hwemukadzi wake wenguva yaizouya mumweya wake. Mukadzi aive asina chaaiziva panguva iyoyo. Nenzira imwechete, maive muri munanababa venyu muri mbeu pavaive vachiri vaduku uye maive musina chamaiziva nezvacho. Pamakazoita miviri yenyama kubva kunanamai venyu ndipo pamakatanga kuziva kuti chii chiri kuitika.
Asi zvino Adamu aive ava munhu wenyama, aive asisaone mweya saka aive ava panjodzi yekunyengerwa nemweya usingaonekwe. Zvino zvaakanga ava munhu wenyama zvaive zvisisina kufanirawo kuti arambe ari nehunhu hwechikadzi maari. Murume nemukadzi vaida miviri yakasiyana kuti vararame vachizviratidza.
Mwari akabva asarudza kuti munhu, Adamu, aida mukadzi kuti agobereka Mwanakomana ari mhandara. Iyi ndiyo yega nzira yaizounza hupenyu husingagume panyika.
Kana Adamu nemukadzi wake vakaunza mwana nekusangana pabonde, hunenge hungori hupenyu hwemunhu uye mwana uyu aisazorarama kwemakore 1000.
Mukadzi waAdamu aifanira kuva nenhengo dzake dzekusangana pabonde kuti aunze hupenyu panyika ari mhandara kana kuti nebonde. Sarudzo yaive yake.
Zvino Adamu aifanirawo kuva nenhengo dzekusangana pabonde kana kuti paisazova neimwe sarudzo kunze kwekubereka vari mhandara. Asi nhengo dzaAdamu dzepabonde dzaisazounza hupenyu husingaperi.
Nenzira imwechete, vanhu vanozviitira zvipiriso zvavo zvezvitendero, asi izvi hazvifaniri kushandiswa sezvo zvisingaunze hupenyu husingagumi.
Saka muti wemweya wehupenyu (kubereka kwemhandara) nemuti wemweya wekuziva (kubereka nekusangana pabonde) zvaikwikwidzirana chibereko chemukadzi. Chibereko chake chiri pakati pemuviri wake. Miti yese yaive pakati pemunda. Saka munda mucherechedzo wechii?
RWIYO RUKURU RWASOROMONI 4:12 Hanzvadzi yangu, mwenga wangu, munda wakakomberedzwa, chitubu chakapoteredzwa, tsime rakafunhirwa.
Munda Mucherechedzo wemukadzi. Munda wakapoteredzwa une ruzhowa rwakaupoteredza. Vakadzi vanofanirwa kuchengetedzwa.
Tsime rakafunhirwa Chinhu chakakoshesesa chemudzimai humhandara hwake. Mwari vanoda kuti tsime reHupenyu husingagume, rinova Mweya waKristu, kuti uuye muMwana akaitwa akapfigirwa mumimba yakapunhirwa.
Saka Mweya waKristu waida kuti Adamu nemukadzi wake vamirire kwemakore 1 000 asati azadzwa neMweya Mutsvene kuti vaunze Mwanakomana vari mhandara-Mwanakomana Jesu mimba yake yakabatwa humhandara huchiripo hwakavanza chibereko chamai vake. Mbeu (Shoko) dziri mukati memuchero (Mwana). Uyu waizova muchero waiberekwa waizounza hupenyu husingaperi kuvatsvene vose vaizodaidzwa kubva muguruva renyika naJesu.
Muti waDiaborosi wekuziva zvakanaka nezvakaipa waizosanganisa kudamburwa kwehumhandara nekuzvara mwana pasisina humhandara. Uhu hupenyuwo zvahwo hwemunhu husingazorarame kwemakore 1000.
Miti miviri iyi yakamonana kana kurukana. Mweya miviri iyi yose inoisa ndangariro mupfungwa dzemukadzi kuitira kuti ishandise chibereko chake kupfurikidza nzira mbiri dzakasiyana dzekubereka mwana.
GENESISI 2:19 JEHOVA Mwari akaumba nevhu mhuka dzose dzesango, neshiri dzose dzedenga; akadziisa kumunhu kuti avone kuti uchadzitumidza mazita api; zvipenyu zvose sezvazvakatumidzwa nomunhu, ndiwo akava mazita azvo.
Adamu aive nebasa guru raive rakamumirira. Adamu aifanira kufunga mazita akakodzera emhuka dzese dzakasiyana siyana neshiri. Kune ndudzi dzeshiri dzakasiyana dzinosvika ku 9 000 panyika nhasi uno. Kufunga kusvika kumazita 9 000 akasiyana zvinogona zvakatora nguva refu. Kana akatumidza rudzi rumwechete mumineti rimwechete saka zvaizomutorera mazuva anosvika gumi nematatu, uye aive nemaawa gumi nemaviri echiedza chepazuva ekushanda pasina kana kuzorora. Saka zuva rechinomwe hatingariti raive zuva rimwechete rine maawa 24 chete.
GENESISI 2:20 Munhu akatumidza zvipfuwo zvose mazita, neshiri dzedenga; nemhuka dzose dzesango, asi kwakashaikwa mubatsiri wakamukwaniraiye munhu.
Pane ndudzi dzemhuka dzinosvika 5 500 dzemhuka panyika nhasi uno. Pamazuva aAdamu kunofanira kuva kwaitove nemhuka dzakawandisa kupinda dziriko nhasi uno. Nekudaro zvaitomutorera nguva kuti adzitumidze mazita dzose.
GENESISI 2:21 Ipapo JEHOVA Mwari wakavatisa munhu hope, akavata; akatora rumbabvu rwake rumwe; akadzivira nyama panzvimbo yarwo.
Mwari ndiye akatanga kuita inodaidzwa kuti oparesheni nhasi uno inoshandiswa mishonga yekurarisa. Mwari akatora chikamu chaAdamu, mbabvu; akavhara paaive avhura. Paisazova nevanga nekuti Mwari ndiye Mukuru wezvese zvekugadzira vanhu. Pachinzvimbo chekurasa mbabvu yaive yabviswa, Mwari akaita chinhu chinoshamisa. Akaita munhukadzi mutsva. Izvi hakusi kutevedzera nekuti mukadzi aive akasiyana nemurume nekure. Asi mbabvu yaAdamu yaive pedyo zvakanyanya nemoyo wake saka izvi zvinoratidza rudo rwakadzama rwaizove naAdamu kumukadzi wake.
GENESISI 2:22 Norumbabvu urwo JEHOVA Mwari rwaakatora pamunhu, akaita mukadzi narwo, akamuisa kumunhu.
Mwari aive aisa munhu mumunda weEdeni. Mwari akamupa mukadzi. Tese tinofanira kuvimba nezvatinopiwa naMwari pachinzvimbo chekumhanya tichitenderera kuti tizadzise zvido neshuviro dzedu tega.
GENESISI 2:23 Munhu akati: Zvino uyu ipfupa ramapfupa angu, nenyama yenyama yangu, uchatumidzwa Mukadzi, nokuti wakabviswa pamurume.
Hapana chataurwa pamusoro peropa. Izvi zvakakosha. Adamu akataura pamusoro penyama nemapfupa chete. Kana paive pasina ropa zvinoreva kuti Mweya Mutsvene waifamba mutsinga dzavo.
Pasina ropa, kusangana pabonde kwaisagoneka nekuti ropa rinofanira kupinda munhengo yemurume kuitira kuti imire.
Saka vose Adamu nemukadzi wake vaive vasingagone kusangana pabonde pavaive mumiviri yavakaitwa vari naMwari.
Adamu nemukadzi wake vose vaive nehupenyu husingagume hunova Mweya Mutsvene waiyerera mutsinga dzavo.
I VAKORINTE 15:50 Zvino, hama dzangu, ndinoreva ndichiti, nyama neropa hazvingagare nhaka yovushe hwaMwari;
Hazvigoneki kuti ropa rive chikamu chehupenyu husingagume hunova hurongwa hwaMwari hwakarurama. Hupenyu huri muropa hunomiririra kutendera kwaMwari kwenguva duku.
Jesu akadeura Ropa rake paCalvari kuti aripire zvivi zvedu.
Akazoonekwa mumuviri waive wamutswa kuvafi waive nenyama nemapfupa asi hapana kutaurwa nezveropa.
RUKA 24:39 Tarirai zvanza zvangu netsoka dzangu, kuti ndini ndimene. Ndibatei, muvone, nokuti mweya hauna nyama namapfupa, sezvamunondiona ndinazvo ini.
Ropa harisi chikamu chehumambo hwaMwari.
Ropa harisi chikamu chehupenyu husingagume.
Chakavanzika chezvivi ndechekuti ropa rakapinda murudzi rwevanhu pamwechete nezvivi. Saka ropa chiratidzo chezvivi. Tinofanira kutsvaga kuti nei ropa remhuka raishandiswa kuripira zvivi.
Tinofanirawo kutsvaga kuti nei Mwari asina kubvira audza Adamu naEva kuti vatendeuke pavakatadza.
Uyu muono usinganzwisisike. Mwari vakatipa tese mukana wekutendeuka. Nei asina kupa Adamu naEva mukana wekutendeuka?
GENESISI 2:24 Naizvozvo munhu unofanira kusiya baba vake namai vake, anamatire mukadzi wake, vave nyama imwe.
Ichi chiporofita chenguva yaizouya.
Mwari aiziva kuti chivi chaizopindira chichikanganisa hukama hwevanhu. Saka Mwari aida kuita kuti wanano ive chitsuwa chekugadzikika munyika isina rugare. Mwari vakamiririra kuti chisungo chewanano pakati pemukadzi nemurume chisimbe kukunda chemhuri pakati pemwana nevabereki vake. Izvi zvinomiririra rudo rukuru pazvose, rudo pakati paJesu nemukadzi wake, kereke yechokwadi. Michato mizhinji inoparara nekuda kwekupindira kwevabereki mudzimba dzevana vavo. Panoita kusawirirana zviri nyore pakati pavamwene nemuroora. Saka chinhu chakanaka kuti vanhu vachangowanana vagare pavo vega, uye vatendere Mwari kuti avatungamirire mazuva ose ehupenyu hwavo, pachinzvimbo chekutungamirirwa nevabereki vanotonga nekupindira mudzimba dzevana.
GENESISI 2:25 Vose vari vaviri vakanga vasina-kusimira, munhu nomukadzi wake, asi havana kunyara.
Vaive mumiviri isina ropa. Pasina ropa mumuviri, kusangana pabonde hakugoneki. Saka nhengo dzavo dzekusangana hadzina zvadzaireva kwavari sezvo vaive vasina basa rekudzishandisa. Vaive vakarurama sezviri vana vadiki vasina nyadzi nekushama kwavo.
Dai vakararama nezvakarehwa naMwari vangadai vakachengetedzwa.
Dai vakateerera kune kumwe kutsanangura kwakangwara kwaive kusiri kumwe nezvakataurwa naMwari, vainyengerwa.
Vaive nesimba resarudzo. Sarudzo yaivepo kuti vazviitire.